३० असोज - मधेस राजनीतिमा कुनै बेला हृदयेश त्रिपाठी र विजय गच्छेदार एक अर्काका प्रतिस्पर्धी थिए । तर एक दशकभित्रै दुबैलाई मधेसी राजनीतिबाट बिकर्षण पैदा भएको छ। र, दुबै दुई विपरीत खेमामा समाहित भएका छन्।
२९ असोज - हामी गर्वका साथ भनिरहेका छौं, रेमिट्यान्स झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर आउँछ। त्यो रेमिट्यान्स पठाउने तिनै नेपाली हुन्, जो वैदेशिक रोजगारीमा छन्। तर, तिनीहरूको लागि सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्न सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले गर्नुपर्ने काम पनि गर्न सकेको छैन।
२८ असोज - गरिबी विरूद्धको अन्तिम युद्ध लड्न चीनले सबै खाले प्रयास जारी राखेको छ। १८औं राष्ट्रिय कांग्रेसले पाँच वर्षमा लिएको लक्ष्य थियो, गरिबीबाट उम्किएर खुसियालीको लक्षमा पुग्ने। कठिन प्रयास र नवीन प्रणालीले गरिबी जित्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यो पाँच वर्षमा देखिएको छ।
२६ असोज - एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको मिलनबाट आत्तिएर संसद विघटनसँगै अस्वाभाविक कदम चाल्न थाले भनेचाहिँ निश्चित छ, ओलीजस्ता चतुर नेतालाई समेत चक्मा दिँदै चौंथो पटक सिंहदरवार प्रवेश गरेका देउवाको चौंथो प्रस्थान पनि अघिल्ला तीनभन्दा फरक हुनेछैन।
अरबमा श्रमिकले कमाउँछ, देशमा दलालले चलाउँछ
२५ असोज - अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आएको सात सय ४० अर्ब रेमिट्यान्समध्ये प्राप्तकर्ता आफैले घरजग्गामा लगानी गरेको रकम साठी सत्तरी करोड भन्दा बढी छैन। अरु सबै दलाल मार्फत शेयर बजार र घरजग्गा दलालको कारोबारमा गैरहेको छ। भोलि शेयरको मूल्य बढ्छ र ऋणीले तिरिहाल्छ भन्ने प्रक्षेपणको आधारमा बैंकले शेयर बजारमा लगानी...
नेपालको २५०औं जन्मोत्सवमा नागरिक महोत्सव
२१ असोज - सन् १७६८ ईस्वीमा जन्मेको नेपाल राज्यले सन् २०१८ ईस्वीमा हजार वर्षको चौथो भाग (२५० वर्ष) पूरा गर्न लागेको छ। चतुर्थांश सहस्राब्दी अथवा चतुर्थांश्राब्दी। यसरी हेर्दा आउँदो वर्ष ९२०१८० नेपालका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण र गरिमामय वर्ष हो।
गरिबी विरूद्ध चीनको विजयी अभियान
१६ असोज - चीनमा अहिले वर्षेनी १ करोड जनता गरिबीबाट मुक्त भैरहेका छन्। अबका तीन वर्षमा अर्थात् सन् २०२० सम्ममा गरिबी विरूद्धको लडाइँमा चीनले प्राप्त गर्ने विजयको लागि दुनियाँ आतुर भएर पर्खिरहेछ।
प्रदेश नम्बर दुईमा राजपा किन पहिलो शक्ति भएन?
९ असोज - राजपा र फोरम नेपालले जितेका सिट संख्यालाई मात्र जोड्ने हो भने हामी मधेसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएका छौं। धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा राजपाले फोरमसंग र फोरमले राजपासँग प्रतिस्पर्धा गरेर दुईवटै पार्टी पराजित भएका छन्।
प्रदेश र संसदको निर्वाचनमा एमालेको १० तयारी
७ असोज - अहिलेसम्मका निर्वाचन एक्लै लड्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो चोटी एमालेसँग एक्लै प्रतिष्पर्धा गर्ने सामथ्र्य गुमाएको छ। एमालेसँग लड्न काङ्ग्रेसलाई माओवादीको वैशाखी टेक्नुपर्ने अवस्था तथा माओवादी–केन्द्रको नीतिगत विचलन र निरन्तर ओरालो लाग्दै जाने स्थिति स्थानीय निर्वाचनको विशेषता हो।
२१ भदौ - प्रदेश २ को निर्वाचन परिणामले नै एमाले राष्ट्रको पहिलो शक्ति बन्ने कि नबन्ने अन्तिम छिनोफानो हुनेछ। स्थानीय तहमा पहिलो शक्ति भइसकेपछि मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा पनि पहिलो बन्न अझ सहज हुनेछ। तसर्थ, एमालेका लागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण परीक्षा हो।
जनप्रतिनिधिसँग बेअर्थको झ्वाँक
२० भदौ - सुन्दा अप्रिय सुनिन्छ, यथार्थ के हो भने वडा सदस्यका लागि मात्र उपयुक्त व्यक्तिहरु प्रमुख वा उपप्रमुख भएका छन्। भलै सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्यो, सरकार घरदैलोमा आयो भनिने गरे पनि वास्तविकता के हो भने सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेकै छैन। सिंहदरबारका आदेशहरुको ठेलीमात्र पुगिरहेको छ।
त्यसैले हाम्रा स्कूलहरु असफल
११ भदौ - स्कूल किन असफल हुन्छन्? यस प्रश्नको उत्तर हामी भौतिक पूर्वाधार र सुविधामा खोजिरहेछौं । राम्रो भवन, भव्य कोठा, स्तरीय शैक्षिक उपकरण, अत्याधुनिक शैक्षिक प्रविधि, पर्याप्त कम्प्युटर, प्रशस्त खेलकूद, उन्नत शिक्षक–तालीम, मोटो बजेट आदिले स्कूललाई सफल बनाउन सक्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसैले हामी...
रेडियो सञ्चालनमा सेनाको के स्वार्थ?
२ भदौ - सीमा सुरक्षा, व्यवस्थाको सुरक्षा वा देशकै सुरक्षा गर्ने महत्वपूर्ण र बहुआयामिक दायित्व पुरा गर्नुपर्ने सुरक्षा अङ्गले सूचना प्रवाह गर्ने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्दैन। यसकारण सेनाले एफएम रेडियो चलाउनु हुन्न।
१९५० को सन्धि पुनरावलोकनः झन् अपरिहार्य
२७ साउन - राणा शासकहरू सत्तालाई चिरजीवन्त बनाउन र दक्षिणी छिमेकी भारतबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा गराउन चाहन्थे। यसका लागि नेपालमा उर्वरभूमि बनाउँदै गरेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई सो विकासबाट सदासदैव रोक्नु पनि आवश्यक थियो। राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबराले यही कार्यका लागि आफनै अग्रसरतामा भारतीय राजदूतश्री...
२२ साउन - निर्वाचनको सङ्घारमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नु र फिर्ता गर्नुपर्नाको कारणबारे केन्द्रीय नेताहरू नै असपष्ट हुनु, लहडमा गृहमन्त्रीको राजीनामा आउनु, निर्वाचनमा राम्रोभन्दा हाम्रोलाई टिकट दिनु र धेरै ढिलो गरी टिकट दिनु जस्ता कुराले कांग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई थप अन्योल बनायो...
हु श् शङ
चीन र भारतबीच नेपालले बन्द ढोकाभित्र बैठक गर्नुपर्छ
२१ साउन - भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सम्मेलन भन्दै नेपालले भारत र चीनबीच बन्द ढोकाभित्र हालका असहमतिमा छलफल गर्न एउटा साइडलाइन बैठकको व्यवस्था गर्न सक्छ। अहिले यो काम नेपालले मात्रै गर्न सक्छ। भारत र चीनबीच जुनसुकै किसिमको द्वन्द्व चर्किए पनि यो क्षेत्रमा खासगरी नेपाल नै पीडित हुने हुनाले नेपालले...
के हुन् नयाँ जनप्रतिनिधिका नयाँ जिम्मेवारी?
१५ साउन - सङ्घीय प्रणाली नै सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्ने जादुको छडी पक्कै होइन। तर, निर्वाचित नेतृत्वको इमान, क्षमता, दूरदर्शिता र सिर्जनात्मकताले गाउँ र नगरको विकासमा गुणात्मक अर्थ राख्दछ। एउटा इन्ड्रोइड मोवाइलमा सयौं फङ्सन हुन्छन्। तर, एउटा सामान्य प्रयोगकर्ताले त्यसलाई फोनको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्छ...
८ साउन - बेलायती साम्राज्यवाट भारत मुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै हामी एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा उदाएका हौँ। आवतजावत, लेनदेन, भाषिक–साँस्कृतिक आदान–प्रदानका हिसाबले भारत र हामी बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ। तर हामीबीचको सम्बन्धको अर्को पाटो पनि छ। राजाहरुको नेतृत्वमा नेपालको पछिल्लो एकीकरण दौरानमा हामी र...
२ साउन - गैससलाई समाजसेवी संस्थाका रूपमा व्याख्या गरिने हुँदा समाजले उनीहरूबाट हाम्रो पारम्परिक मान्यता अनुुसारकै स्वच्छ एवं निस्वार्थ चरित्र र व्यवहारको अपेक्षा गर्छ। जब त्यस्तो देखिँदैन, आलोचना शुरू हुन्छ। जहाँसम्म डलर खेतीको प्रश्न छ, समाजले डलर खेती स्वयंलाई नराम्रो मान्दैन। उसले त डलर आर्जन गर्ने...
२८ असार - ममता ब्यानर्जीका बयानले थुप्रै पहेलीहरू निर्माण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगातार विदेश भ्रमणमा छन्। आगामी १७ जुलाई राष्ट्रपतिको चुनाउ छ, जसमा भाजपा उम्मेदवारका लागि सबै पार्टीहरूबाट भोट मागिएको छ। यसैले १७ जुलाईभन्दा अघि केन्द्रबाट वार्ताका लागि कुनै प्रत्युत्तर आउँछ भन्ने आशा...